Akkaataa interneetii irratti icciitii kee eeggachuu dandeessu. - Gaachana Sabaa
November 7, 2017 November 7, 2017 Gaachana Sabaa
Har’a Teeknolojii jarraa kanaa fayyadamuun akka waan dhaloota eebbifamneetti warrii ilaallu heedduu dha. Dhugaatti yoo ilaalle gammachuun hangasii hin barbaachisu sababni isaas wanti dhufu hundi faaydaa fii fafa isaa waliin dhufa.Garuu gutuuguutuutti abdii wanti nama kutachiisus hin jiru.
Akkuma beekamu har’a TV fii Bilbila qunnamtii akkasumas interneetiin sadarkaa durii irraa guddina agarsiisaniiru.Harra kam fayyadmnee kam akka dhiisnu hin beeknu.Baay’inaa fi akka salphaatti waan argamaniif itti fayyadamiinsaaf qaalii tahuu baatan illee balaa guddaa qabu.
Qunnamtiin bilbila guyyaa guyyaan biyya keessaatti tahuu akkasumas alaa keessatti daangaa qaxxaamuruudhaan goonu qaama sadaffaadhaan gidduu taa’uun dhaggeeffatama.
Wanti kun kan tahaa jiru qamoota mootummootaa kanneen akka tikaa fii poolisiidhaan yeroo tahu ergaa barreeffamaa fii bilbila sagaleedhaan godhamu hunda baruudhaan sihordofuu danda’u.
Kana qofaas miti yoo sibarbaadan bakka ati jirtu beekuu danda’u kanaafuu qabamuun kee beekamaa dha.warra mootummaatiin ala Namootni dhuunfaa warra badii hannaa nama irratti geggeessuu barbaadaniinis hordafamuu dandeessa.Bilbilaa fi interneetaan akka ittiin si hordofan asiin gaditti dubbistee hubachuu dandeessa.
Bilbilli kamuu Imsi qaba,tokko- Subscriber Identity Module(SIM) fii International Mobile Subscriber Identity ( IMSI) jedhama.maashiniin tokko bilbila tahuuf Sim fii Maashinii Bilbilaa walitti fiduudhaan bilbila guutuu qunnamtii fii interneetaaf tahee fayyadamna.
Kanaafuu Sim irrattis odeeffannoon kee nii jira eenyummaa kee kan ibsu jechuudha.Bilbila qola isaa irrattis odeeffannoon kee nii jira.
kun lamaanuu yoo bilbilli Mootummaan ykn nama dhuunfaatiin yoo hak taate odeeffannoo guutuu sirraa argatu. Edward Snowden akka jedhutti wanti baay’ee nama rifachiisu yoo hak taatellee beekuu hin dandeessu jedha.Eegaa bilbila kee to’atanii booda bilbila kee guutuu guutuutti waan dhuunfataniif ati inuma bitte malee isaan abbaa qabeenyaa tahan jechuudha.
NSA’n bifa adda addaatiin akka lammiilee ofiitii fii kan adduunyaa guutuu dhaggeeffatan beekamaa dha.Wanti baay’ee nama sodaachisu keessaa Mootummaan Ameerikaa Mootummaa abbaa irree wayyaaneetiifis akka hojjataniifii nubasaasaa jiran beekamaa dha.
Kana jechuun qunnamtii guyyaa guyyaa,ergaa barreeffamaa,kuusaa lakkoofsaa namaa,kaameraa fii Sagalee dibbee (ispikara) bilbila keetiitti fayyadamuudhaan to’annaa interneetii,email,weebsaayitii kam akka seente quba qabu jechuudha.Maashiniileen isaan itti fayyadamanis kanneen armaan gadiiti.
Imsi Catcher ‘in meeshaa ittiin Imsi kee to’achuudhaan wantoota bilbila keetiin fayyadamtu hunda to’achuu isaan dandeessisa.kun immoo qunnamtii sagalee qofa osoo hin taane ergaa barreeffamaa fii bakka ati jirtu dabalatee to’achuuf itti fayyadamu.
Kun ammoo sibiilaa Networkii sitti dhiyaatutti fayyadamudhaan.Kana qofaa osoo hin taanee poolisoonni konkolaataa isaanii irratti hidhuu dhaan bakka hiriiraa dhufuudhaan ykn ganda keessa deemuudhaan akkasumas helikoptara irratti hidhuudhaan magaala irra oofuun namoota bilbila qaban hunda Imsi isaaniitiin walitti qabaatti basaasu.Kana jechuun bakka ooltee bultu hunda quba qabaatuu jechuu dha.
Imsi catcher (stingray)- maashina kanatu odeeffannoo bilbila sakaaluudhaan nama basaasa.
Kanneen armaan gadii kun kan gochaa garaagaraatiif isaan itti fayyadamanidha.
Maashiniin kun Bilbilli kee yoo dhaamsitee jiraatte bilbila kee banuuf fayydada,quba qabeenya kee malee ykn deebisanii dhaamsuuf.
Kun ammoo Microphone bilbila keetii banuudhaan sihii fii naannawa kee waan jiru hunda dhaggeeffachuuf isaan gargaara.
Tracker Smurf bakka ati jirtu baruuf hordoffiidhaaf isaan gargaara.Kun ammoo kubbaaniyyoota tajaajila Interneetaa kennan kana hak godhuudhaan kompitara nama dhuunfaa to’achuu dabalatee jechuudha.Kunis sarara bilbilaa fii sarara interneetaa dabalatee jechuu dha.
Malli kun odeeffannoo qunnamtii lammiilee Ameerikaa fii lammiilee biyyoota biroo gidduutti tahu gidduutti waraabuun hambifatu.Kun ammoo email fii wantoota google irratti ilaalte hunda dabalateeti.walii galatti Google ,facebook ,twitter,youtube ,apple,android,yahoo fii skype dabalateeti kanneen hafan biroos.
Upstream & Tempor
Waliigalatti CIA,NSA,FBI fii GCHQ waan elektrooniksii tahe hunda vaayrasii garaagaraatiin abbaa fedhan gadi fageenyaan to’achuu danda’u.Softweerii fedhe smart TV dabalatee cabsuudhaan basaasummaaf itti fayyadamuu danda’u.
kanaafuu waan haasooftu fii qabiyyee qunnamtii keetii filachuun ala waanti nuti goonu jiraa gaaffii jedhuuf wantii guddaan dhibbaa dhibbatti gaachana namaaf tahu hin jiru ta’a yoo jiraates baay’ee qaaliidha.
Garuu salphisuudhaaf ykn xiqqaatti of dhoksuuf wantoota asiin gadii godhuun barbaachisaa dhaa.Wanti tokko beekamaadha Ameerikaan waan hanga biyya isaaniitiif bu’aa buusetti waan fedhan godhu faaydaa biyyaa waan taheef homaa miti jennee irra darbuu dandeenya.
Garuu Mootummaa gosaa Itoophiyaa amala diinummaa uummata bulchutti agarsiisu akkasumas mootummaa immaammata Ameerikaa, waraana shororkeesummaa irratti kan jedhu kana turtii aangoo isaaniitiif akka daldalaatti fayyadamuun isaanii beekamaa dha..
Kana galmaan gahuuf ammoo lammiilee biyyattii mirga isaanii karaa nagahaatiin falmatan akkasumas lammiilee isaan hin deeggarre hunda akka shororkeessitootaatti lakkaahuudhaan Ameerikaaf yeroo dhugoomsuu yaalan argamaniiru.
Eegaa dhihoo kana Itoophiyaan meehshaalee NSA argatte jedhanii,bilbila kee jibbuun tarkaanfii duraati.Itti fayyadamuun dirqama waan taheef hanga danda’ame of eeguun ammoo barbaachisaa dha.Kan jalqabaa Browser VPN gargaaramu ykn vpn fayyadamuudha.
VPN-Virtual Privacy Network
VPN’in Networkii encrypt ykn qunnamtii iccitaawaa IP keetii,search history fii bakka ati jirtu dhoksuun interneetii fayyadamaa jirtu irratti golgaa addaa siif kennuun online tti badda.Kana jechuun yeroo VPN fayyadamtu IP kubbaaniyyaa sanaa fayyadamta osoo hin taane kan ofii fayyadamta garuu alatti qaama sadaffaa si daawwachuu barbaaduuf IP fii Location(baakki) ati jirtu dhokataadha.Kan isaan argan kan sobaati jechuu dha.
Fknf yoo Kubbaaniyyaan VPN ati fayyadamtu Canada jiraatee osoo Afrikaa dhaa fayyadamtuu qaamni sadaffaan Kaanadaa dhaa si arga akka waan Canada jirtuu jechuu dha.Kanaafuu hanga tokko of eeguu dandeessa.Kana qofa osoo hin taane yeroo online fayyadamtu odeeffannoon kee akka hakarootaan hin hatamne golgaa siif taha.Keessattuu WIFI Hoteelaa,mana yaalaa,Cafe fii kkf fayyadamuuf dhibbaa dhibbatti VPN sifeesisa.VPN Kompitaraa fii bilbilaafis bifa app nis nii jira
1.Epic privacy browser
Epic browser fayyadamtoota interneetiif bu’aa guddaa kenna,Algorism google ittiin nama hordofu fii websaayitoota biroos ittisuudhaan qunnamtiikee hanga tokko encrypt godhuu danda’a.VPN biyyoota muraasa qaba waan ta’eef sanuma keessaa filattee tokkotti maxxanuu dandeessa.
Wanti dabalataa Epic weebsaayitoota tokko tokko kan (pop up ads )beeksisa nama jeequ qaban illee sirraa hambisuu danda’a.weebsaayitoota qunnamtiin isaanii encrypt ta’an qofatti si qajeelcha.kana hubachuuf yeroo interneetii fayyadamtan gubbaa gara bitaatti furaa magariisa ykn https waan jedhutu jira,yoo furaan magarisni jiraate rakkoo hin qabu yoo diimaa ta’e deebihi, weebsaayitii sana hin banin.
Odeeffannoon kee hundi hatamuu danda’a.Wanti hubachuu qabdu fuulli interneetii furaa magariisa qaban illee mootummaa irraa si hambisuu hin danda’u yoo hattootaa fii virus garaagaraa irraa tahe male.Kun qofti gahaa miti IP wifi keetii hanga hin dhoksinetti nagaa hin argattu,kanaafuu softweeriin kun kana galmaan gahuuf sigargaara.
Opera’n duris qunnamtii bareedaa fii ariitii qabu namaaf kennaa akka ture waanuma beeknu dha.Ammaan tana garuu Opera 40 VPN dabalatee waan dhufeef akka salphaatti serverii isaanii tokkotti walqabsiisuun adduunyaa kana irraa bakka serveriin isaanii jiru keessaa filattee adduunyaa biraa irraa mul’achuu dandeessa.
Kana jechuun yeroo ati Finfinnee taatee osoo fayyadamtu Ameerikaa dhaa qaama sadaffaatti mul’atta jechuudha.Waan tokko hubachuun barbaachisaa dha, yoo ergaa kee baran illee bakka ati jirtu baruun baay’ee hamaa dha.kanaafuu hojii online kee icciteessi hanga dandeessutti.
Tor browser bifa app nis androidiif google play store keessatti ni argama.Tor ammaan tana waggaa 10 ol waan taheef Mootummootni cabsuuf yaaluun isaanii hin oolle kanaaf dhiyoo kana linux fi mac irratti rakkina dhalatee tureef suphaniiru.
Akkuma kanneen asiin olii kana Tor sooftweeriin serveroota adda addaatti raabsuudhaan akka qunnamtiin interneetaa hin baramne fii fuula kam akka daawwatte akkasumas weebsaayitoonni ati bantee fayyadamte akka bakka ati jirtu hin barre godha.Dabalataan weebsaayitoota qubsuma biyyaan alatti dhoowwaman illee banachuu dandeessa.Hubachiisa yeroo softweerii kana buufattu sirnaan duubisi waan godhuu qabdu akka bartuuf.
Brave browser akkuma browsera asiin olii dhimma wal fakkaataa irratti kan hojjetu yoo tahu hordoffii interneetii irratti sirratti godhamu hunda xiqqeessuu fii beeksisa nama dhibanii fii fuula weebsaayitii banuuf yeroo fudhatan cufuudhaan ariitii dabala, akka warri uume jedhanitti.Brave chrome desktop waliin harka lamaan ariitiin caalaa jedhu.
Dooble freeBSD, Linux, OS X, OS/2, and Window irratti hojjechuu kan danda’u yoo tahu.kun addatti setting hedduu kan ofii akka barbaaddutti kan sirreeffattus nii qaba.
Commodonis faayidaa wal fakkaataa akkuma warra asiin olii kana kennu.Kanneen keessaa tokko kan sitti tole filattee fayyadamuu dandeessa.Wanti hubachuu qabdu haala kanaan yoo tahe malee qunnamtiin kee kam iyyuu iccitaawaa miti.
Serveroonni VPN armaan gadii kun hedduun isaanii bifa bittaatiin kan jiran yoo tahu muraasni isaanii ammoo maallaqa malees nii jiru.Kanneen akka browser osoo hin taane yeroo comptara kee irratti buufattu kompitara kee guutuu Vpn jala galchu.Wanti hubachuu qabdu yoo privacy keetiif baay’ee kan yaaddu warra armaan gadii kana yaali.
1.IPVanish 7. TunnelBear
2.VyprVPN 8. Hotspot Shield
3.ExpressVPN 9. ZenMate
← Uhuru Kenyatta declared President elect of Kenya again
Prezident Mugaben humna waraanaan to’atamanii jiru. →